Akụkọ - Kedu ihe dị mma maka igwe ịcha laser laser
Kedu ihe dị mma maka igwe ịcha laser laser
Gịnị Materials adabara Metal Laser Ịcha Machine
Ọmụmụ nke metal igwe ịcha laser bụ tumadi iji melite arụmọrụ arụmọrụ yana ịbelata izi ezi. Mana arụmọrụ dị elu na nkenke dị elu adịghị anya n'ihe ọrụ mmadụ nwere ike nweta.
Site n'ọganihu ọha na eze, a na -etinyekwu teknụzụ dị elu na ngalaba aha. Dịka ọmụmaatụ, laser bụ ihe ijuanya na ihe omimi nye ndị nkịtị na narị afọ gara aga. Ugbu a, site na mmepe nke teknụzụ, ejirila laser n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Taa, ka anyị tụlee ihe ndị ahụ dabara adaba igwe ịcha laser.
1. Mbelata efere nchara carbon:
Sistemụ ịkpụ laser Jiatai nwere ike belata oke ọkpụrụkpụ nke efere nchara carbon dị nso na 20 mm, na iberibe efere dị gịrịgịrị nwere ike warara ruo ihe dịka 0.1 mm. Mpaghara na -emetụta ọkụ nke ịcha laser obere carbon nchara dị obere, na njikọ ịcha ya dị larịị, dị larịị ma nwee ịdị mma. Maka nchara carbon dị elu, ịdị mma nke mbepụ laser dị mma karịa nke nchara carbon dị ala, mana mpaghara ọ na -emetụta oke ya ka ukwuu.
2. Igwe anaghị agba nchara:
Laser ọnwụ dị mfe bee igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ. Site na sistemụ ịkpụ eriri fiber dị elu, oke ọkpụrụkpụ nke igwe anaghị agba nchara nwere ike iru 8mm.
3. Mbelata efere efere alloy:
Enwere ike igbutu ọtụtụ alloy steel site na laser, ịdị mma nke mbepụ dị mma. Mana maka nchara ngwa ọrụ na nchara anwụ anwụ nwere ọdịnaya tungsten dị elu, a ga -enwe nzere na slag na -arapara n'oge ịkpụ laser.
4. Mpekere aluminom na alloy:
Aluminom ọnwụ bụ nke agbaze ọnwụ. Enwere ike nweta ogo ịcha mma dị mma site na iji ikuku inyeaka na -afụpụ ihe ndị a wụrụ awụ na mpaghara ịcha. Ka ọ dị ugbu a, oke ọkpụrụkpụ nke ịkpụ efere aluminom bụ 3mm.
5. Ịcha ihe ọla ndị ọzọ:
Ọla kọpa adịghị mma maka ịkpụ laser. Ọ dị ezigbo mkpa. Ọtụtụ titanium, titanium alloy na nickel alloy nwere ike ịkpụ site laser.